Ny fampiharana 5 tsara indrindra hanovana ny feo amin'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana 5 tsara indrindra hanovana ny feo amin'ny Android
Aaron Rivas | 22/09/2021 05:47 | Fampiharana Android, Finday
Imbetsaka isika no somary mankaleo ary te-hanelingelina ny tenantsika amin'ny fomba rehetra. Ny iray amin'izy ireo dia afaka milalao ny fandraisam-peo amin'ny findainay Android, na dia indrisy tsy misy fomba na fampiharana ho azy. Azontsika atao koa ny mampiasa fampiharana marobe hanovana ny feo ary, amin'ity fomba ity, mahazo audio izay azontsika henoina mba hihomehezana miaraka amin'ireo mpiara-miasa na, alefaso amin'ny alàlan'ny WhatsApp na tambajotra sosialy na inona na inona tanjona.
Izany no antony anangonana ankehitriny ny fampiharana 5 tsara indrindra hanovana ny feo amin'ny Android. Maimaimpoana ary misy ao amin'ny Google Play Store daholo. Ho fanampin'izay, izy ireo dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny karazany roa, na amin'ny asany na amin'ny fampidinana izay ireharehany sy ny lazany ananany.
Etsy ambany no hahitanao andianà fampiharana tsara indrindra hanovana ny feo amin'ny finday finday Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra.
Na izany aza, ny iray na maromaro dia mety manana rafitra fandoavam-bola bitika ao anatiny, izay mamela ny fidirana amin'ireo fiasa premium sy fidirana amin'ireo endri-javatra maro hafa, ankoatry ny zavatra hafa. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Eny eny, andao isika hanatona azy.
1 Mpanova feo misy vokany
2 Fanovana feo
3 Fanovana feo miaraka amin'ny effets - Voice Modifier
4 VoiceFX - fiovan'ny feo misy vokany amin'ny feo
5 Mpanova feo Super - vokam-peo mpitam-boky
Mpanova feo misy vokany
Manomboka amin'ny tongotra ankavanana ary iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hanovana ny feo amin'ny Android, manana Voice changer misy vokany izahay, fampiharana iray somary feno miaraka amin'ny safidy marobe hanovana sy hanovana ny feo amin'ny fomba maro, mba hahafinaritra azy na tsy ho fantatra tanteraka. Tsy ho an'ny n'inona n'inona dia efa maherin'ny 100 tapitrisa ny fisintomana ao amin'ny Play Store sy ny lazan'ny kintana 4.4 izay mifototra amin'ny fanehoan-kevitra tsara manodidina ny iray tapitrisa sy sasany.
Afaka mandre toa ny mpimamo ianao na toa robot. Misy koa vokatra izay mahatonga anao ho toy ny biby mahatsikaiky, zombie, vahiny na adala. Maherin'ny 40 ny vokatra azo alaina ao amin'ny repertoire ao amin'ny Voice Changer. Misy mihitsy aza ny biby, ao anatin'izany ny an'ny squirrel na, na dia te-hampitahotra bebe kokoa aza ianao, dia an'ny goavambe tsy mahalala fomba sy feno volo. Adala olona na atahory azy ireo amin'ity fitaovana ity.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba izany dia izany Izy io koa dia ahafahanao mitahiry ireo rakipeo ary mandefa azy ireo amin'ny alàlan'ny WhatsApp, mailaka, tambajotra sosialy ary maro hafa. Kely na tsy misy izany hananana azy io amin'ny fampiharana fotsiny, ary fantatsika tsara izany. Mandritra izany fotoana izany, iray amin'ireo fiasa mahaliana indrindra izay mamela anao hamorona audio avy amin'ny lahatsoratra, amin'ny fanoratana fotsiny izay tianao ho re.
Izy io koa dia miaraka amin'ny piano, ahafahanao manafatra feo efa voarakitra an-tsoratra, mamorona sary misy feo ary mamela anao hametraka ny rakipeo miaraka amin'ny feo novaina ho ringtone na fampandrenesana. Farany, 10 MB ihany ny lanjany, noho izany, manomboka izao, izy io dia iray amin'ireo maivana indrindra amin'ity paositra ity, mendrika hotononina.
Fampiharana iray hafa izay malaza be Fanovana feo. Izy io koa dia ahafahanao manova ny feo amin'ny fomba maro ary manana mpamatsy mpampiasa tena velona izay manana sary maneho ny karazana vokatra tsirairay. Azonao atao ny maneno toy ny robot, squirrel, zokiolona, ​​martian na feo toy ny renitantely, mamo, natahotra na demonia. Betsaka ny sivana am-peo azonao atao mba hanokana fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny namana sy mpiara-miasa.
Tsy vitan'ny hoe afaka manoratra raki-peo ianao ary mampihatra ny vokany tadiavinao avy amin'ilay rindrambaiko ihany, fa afaka manokatra iray ihany koa ianao ary manova azy io araka ny itiavanao azy amin'ny sivana tadiavinao indrindra. Mandritra izany fotoana izany dia mamela anao hijery sy hanova azy ireo mora sy haingana. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny maha endri-javatra sy fiasa tsy azo adino, dia ahafahana manao izany zarao amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy toy ny Facebook sy haino aman-jery ary sehatra hafa ireo audio novaina. Ny zavatra hafa dia mamela anao hametraka ny firaketana ho feo fampandrenesana tsy misy fahasarotana lehibe. Ary farany, iray hafa ihany koa izay maivana be ihany, milanja 7 MB mahery.
Fanovana feo miaraka amin'ny effets - Voice Modifier
Raha mandroso hiresaka momba ny fampiharana fahatelo hanova ny feo amin'ny Android amin'ity fanangonana ity dia manana an'ity iray ity koa isika, izay miaraka koa be ny effets izay mahatonga azy io ho safidy tena tsara hanovana ny feonao amin'ny fomba samihafa ary hahatonga azy tsy ho fantatra tanteraka, eny fa na dia amin'ireo namanao, fianakavianao ary olona akaiky anao indrindra izay nahalala anao tamin'ny fiainanao rehetra aza.
Izy io dia iray amin'ireo mpampiasa interface tsara indrindra, mahatonga azy ho mora ampiasaina sy takarina. Ao anatin'ny iray minitra latsaky ny iray minitra dia efa azo atao ny mahafantatra ny fomba fampiasana azy tanteraka hanomezana fihetsika ny firaketana feo sy fanovana miaraka amin'ireo sivana sy vokany rehetra atolotray.
Iray amin'ireo zavatra mangatsiaka indrindra mety ho mety amin'ny vazivazy eo amin'ny namana ny fiovan'ny feo avy amin'ny lahy ka hatramin'ny vavy ary ny mifamadika amin'izany. Amin'izany dia tsy hisy hahafantatra ny mombamomba anao ary afaka mamitaka olona ianao. Ny tsara indrindra dia tsy afaka manova na manova ny feo avy amin'ny rakipeo fotsiny ianao, fa amin'ny alàlan'ny fanafarana rakitra audio avy amin'ny fitehirizana anatiny ny finday Android. Izy io koa dia miaraka amina repertoire vonona ny hampiasa olo-malaza. Aoka ianao ho mahatsikaiky indrindra amin'ny vondrona miaraka amin'ny Voice Changer misy effets - Voice Modifier.
Developer: App misy ronono & naoty & Audio Editor & Voice Recorder
VoiceFX - fiovan'ny feo misy vokany amin'ny feo
VoiceFX dia tsy tokony ho diso amin'ity lisitr'ireo fampiharana tsara indrindra hanovana ny feo amin'ny Android ity. Ary io fitaovana io, toy ireo voalaza teo aloha voalaza sy voalaza, manome ihany koa ny vokatra sy sivana marobe izay mendrika ny henoina. Mamela anao hanova ny feo sy ny mozika, ka hahatonga azy io ho iray amin'ireo mahaliana indrindra ao amin'ny Play Store. Izy io koa dia ahafahana mamonjy firaketana an-tsary amin'ny endrika MP # ho fizarana mora any aoriana.
Mpanova feo Super - vokam-peo mpitam-boky
Mba hamaranana dia manana an'ity fampiharana ity izahay, iray hafa izay aseho ho safidy tsara hafa mba hanomezana fomba mora sy haingana ireo feo sy rakipeo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana 5 tsara indrindra hanovana ny feo amin'ny Android
Inona no azontsika antenaina amin'ny lalao The Lord of the Rings: Avelao hanomboka ny ady